Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Iza i Donald Wright, VP vaovao an'ny Alaska Airlines?
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny Alaska Airlines dia nanonona ny filoha lefitry ny fiaramanidina Donald Wright, lefitra misahana ny fikojakojana sy ny injeniera, nanomboka ny 23 aog 2021.
Amin'ny anjara asany vaovao, Wright dia hitarika mpiasa 1,346 XNUMX, ao anatin'izany ny ekipa miasa ara-teknika, ary hanara-maso ny fiarovana, ny fanarahan-dalàna ary ny fahombiazan'ny zotram-piaramanidina Boeing sy ny Airbus.
Donald veteran'entana misidina amin'ny fiaramanidina no nifidy ny filoha lefitra misahana ny fikojakojana sy ny injeniera ao amin'ny Alaska Airlines
Donald Wright dia nifidy ny filoha lefitra misahana ny fikojakojana sy ny injeniera ao amin'ny Alaska Airlines.
Wright dia miditra ao amin'ny orinasa taorian'ny fisotroan-dronono nataony avy amin'ny United Airlines.
Wright dia handray ny andraikitra notanan'i Constance von Muehlen teo aloha.
Alaska Airlines'birao mpitantana dia nifidy ny filoha lefitry ny fiaramanidina Donald Wright, filoha lefitra misahana ny fikojakojana sy ny injeniera, nanomboka ny 23 aogositra 2021.
Nantsoin'ny Alaska Airlines ho filoha lefitra vaovao
Wright dia handray ny andraikitra notanan'i Constance von Muehlen teo aloha izay notendrena ho Chief Operating Officer tamin'ny 3 apr. In
Wright dia miditra ao amin'ny orinasa taorian'ny fisotroan-dronono farany teo United Airlines, izay niasan'ny filoha lefitry ny asa fikojakojana, tompon'andraikitra amin'ireo mpiasa fikojakojana andalana mihoatra ny 6,500 45 ao amin'ireo gara XNUMX ary koa ireo mpivarotra fikojakojana fiaramanidina antoko fahatelo manerantany.
"Don dia mpitarika stratejika matanjaka manana rakitsoratra efa voaporofo ny fanatsarana ny fahombiazan'ny asa sy ny traikefa lehibe amin'ny indostria mitarika hetsika ara-teknika," hoy i von Muehlen. "Amin'ny maha mpandinika mialoha amin'ny fanatsarana ny dingana ary ho mpisolovava mahery vaika momba ny fiarovana sy ny fanarahan-dalàna hatramin'ny andro voalohany naha teknisiana manana mari-pahaizana momba ny fiaramanidina dia matoky aho fa hanampy sy hitarika ny ekipan'ny Maintenance & Engineering any amin'ny toerana avo i Don."